Ahịa Gị A Na-Erite Uru nke Video Video? | Martech Zone
N'ụtụtụ a, anyị zipụrụ ozi Ihe Mere Azụmaahịa Gị Ga-eji Jiri vidiyo na Ahịa. Otu uzo ozo maka ojiji nke vidiyo nke n’enye ndi mmadu aka na nsonaazụ ya bu saiti vidio ndi mmadu, ya na oke nlere na ojiji. Ndị ọrụ dị iche iche na-eji usoro ndị a eme ihe ma na-ewepụta ụfọdụ nsonaazụ dị mfe ma dị ịtụnanya na-elewanye anya, na-akọrọ ndị ọzọ, na-eme ka nghọta miri emi nke akara ha na ọnụego mgbanwe dị elu.
E wezụga Youtube, enwere ọtụtụ nyiwe vidiyo ndị ọzọ. vine, Vimeo, Google+ Hangouts na Instagram niile bụ nnukwu ebe ị ga-ekerịta vidiyo ma sonye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke e-ahịa yana hashtags na meta-ozi. Gbanwee n'ime ụwa nke vidio mmekọrịta taa! Jikọọ na ndị mmadụ ka ị na-agbakwunye na mkparịta ụka dịnụ na ụlọ ọrụ gị na akara gị na mgbasa ozi vidiyo nwere ike ịkọwapụta. Megan Rigger, Sigma Web ahịa.
Enwere ike ịnwa ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ nọrọ n'ụlọ video na ha onwe ha ma anyị agaghị enye ndụmọdụ na. Nke a bụ mmebi nke saịtị vidio mmekọrịta kacha elu yana ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị. Site na itinye ego dị ukwuu, ị nwere ike imeri ihe ịma aka nke nnabata - mana ị gaghị enweta ohere ndị na-ege ntị saịtị ndị a na-enye:
Youtube bụ saịtị nke abụọ a na-agakarị na ụwa na igwe nyocha nke abụọ kachasị - yana ihe karịrị 1 ijeri nleta kwa ọnwa na ihe karịrị ijeri awa 6 nke vidiyo a na-elele kwa ọnwa.
Vimeo na-enye ulo oru ndi ozo mara mma nke Youtube. N'ime saịtị 250,000 na-eji Vimeo.
Abanyela Google Hangouts na ngwa Google ma bụrụ ụzọ dị mfe iji kesaa ngosi na ndụ na ajụjụ ọnụ, wee kesaa ha maka oge ọzọ.
Instagram malitere dị ka saịtị ntanetị ma na-akwado vidiyo ugbu a. Ka ọ na-erule ọnwa Ọktọba nke 2013, 40% nke vidio ndị kachasị akọrọ site na ụdị.
vine bụ ụdị nke Twitter nke vidiyo (na nke Twitter), na-enye ohere maka ịkekọrịta vidiyo dị mkpirikpi. Ha enweghị ogologo ndụ, n'agbanyeghị!
Tags: google hangoutsinstagramahịa nke instagramelekọta mmadụ videoelekọta mmadụ video maka azụmahịaVimeovimeo ahiavineahịa vaịnyoutubeahia ahia youtube
Ebumnuche 2014 B2B Digital Marketing, Budget, Ọrụ na Ihe ịma Aka
Septemba 16, 2014 na 12:49 ehihie
Azụmaahịa niile kwesịrị iji ahịa vidiyo ekwenyere m 100%! Enwere m ọtụtụ blọọgụ na-emesi isi okwu a ike. Ọbụghị naanị na ịre vidiyo kwesịrị ịbụ otu n'ime ụzọ isi kpọsa ozi mana ịmara ka esi eme vidiyo ndị ahụ nke ọma ka ha nwee ọgaranya na ọdịnaya na kachasị maka SEO. ikike ma ọ bụ vidiyo ha na / ma ọ bụ azụmahịa ha agaghị ahụ. Ezigbo mma biputere na ahịa vidiyo!